बार्सिलोनालाई उछिन्दै रियल म्याड्रिड शीर्षस्थानमा उक्लियो | Radio Annapurna Nepal <!-instant articles-->
R A N K H A B A R
बार्सिलोनालाई उछिन्दै रियल म्याड्रिड शीर्षस्थानमा उक्लियो
सोमबार, ८ आषाढ, २०७७
स्पेनिस ला लिगा अन्तर्गत आइतबार राती भएको खेलमा जित दर्ता गर्दै रियल म्याड्रिड अंक तालिकाको शीर्षस्थानमा उक्लिएको छ । रियल सोसीडाडको मैदानमा म्याड्रिडले २–१ को जित दर्ता गरेको हो ।
खेलको ३२ औं मिनेटमा मात्र खेलमा गोल गर्ने अवसर जुरेको थियो । रियल म्याड्रिडका फरवार्ड करीम बेन्जेमाले पेनाल्टी क्षेत्रको ठिक भित्रबाट गरेको शक्तिशाली प्रहारलाई गोलरक्षक एलेक्स रेमिरोले विफल पारे । लगत्तै क्यासेमिरोले झन्डै ३५ यार्ड टाढाबाट गरेको प्रहारले रेमिरोलाई समस्या दिन सकेन ।
४३ औं मिनेटमा रियलले अर्को अवसर सदुपयोग गर्न सकेन । भिनिसियसको प्रहारलाई गोलरक्षक रेमिरोले विफल पारे । उक्त रिबाउन्डमा बेन्जेमाले गोल गर्ने प्रयास गर्दा रेफ्रीले अफसाइडको संकेत दिएका थिए ।
दोस्रो हाफको सुरुवातमा नै रियल म्याड्रिडले पेनाल्टीको अवसर प्राप्त गर्यो । डिएगो लोरेन्टेले पेनाल्टी क्षेत्रभित्र भिनिसियसलाई लडाएपछि रेफ्रीले पेनाल्टी दिएका थिए । उक्त पेनाल्टीलाई कप्तान सर्जियो रामोसले गोलमा परिणत गर्दै सुरुवाती अग्रता दिलाए । रामोसको जारी सिजनको यो सातौँ गोल थियो ।
सोसीडाडले खेलको ६८ औं मिनेटमा गोल फर्काएपनि रेफ्रीले भिडियो असिस्टेन्ट रेफ्रीको सहायता लिँदै गोललाई मान्यता दिएनन । वैकल्पिक खेलाडीका रुपमा मैदान प्रवेश गरेका अदनान जानुजाजले २० यार्ड टाढाबाट गोल गरेका थिए । तर भीएआरले सोसीडाडका मिकेल मेरिनोले अफसाइड अवस्थामा खेलमा प्रभाव पारेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
त्यसको दुई मिनेटपछि नै रियलले अग्रता दोब्बर पार्यो । करीम बेन्जेमाली पेनाल्टी क्षेत्र भित्र बल नियन्त्रणको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै गोल गरेका थिए । उनले छातीले बल रोक्दै दोस्रो टचमा बल नियन्त्रण गर्दै पोस्टमा प्रहार गर्दा रेमिरोले बचाउने कुनै अवसर पाएनन् । ७३ औं मिनेटमा एलेक्जेन्डर इसाकको प्रहारलाई रियलका गोलरक्षक थिबाउट कोर्टुवाले उत्कृष्ट डाइभ दिँदै बचाए ।
८३ औं मिनेटमा घरेलु टोलीले गोल फर्काउँदै खेलमा फर्कने संकेत देखायो । मिकेल मेरिनोले उत्कृष्ट फिनिस गर्दै खेललाई रोमान्चक मोडमा पुर्याएका थिए । रोबर्टो लोपेजको क्रसमा मेरिनोले पेनाल्टी क्षेत्रको बायाँ भागबाट गरेको शक्तिशाली प्रहारलाई कोर्टुवाले बचाउने कुनै अवसर पाएनन् । सोसीडाडले खेलको अन्त्यतिर रियलमाथि दबाब कायम गरेपनि गोल फर्काउन नसक्दा हारको सामना गर्नुपर्यो ।
यस जितसँगै रियल म्याड्रिड अंक तालिकाको शीर्षस्थानमा पुगेको छ । म्याड्रिड टोली र साविक विजेता बार्सिलोनाको समान ३० खेलमा ६५ अंक भएपनि हेड टु हेडमा रियल अगाडी रहेको छ । सोसीडाड भने ३० खेलमा ४७ अंकसहित छैटौँ स्थानमा नै यथावत छ ।
अमर राज गुरुङ
रत्न बहादुर कटुवाल
फोन +९७७ १ ४७२१४५६, +९७७ १ ४७२१४५३
© Copyright 2018 Annapurna Media Network. All rights reserved.
रेडियो अन्‍नपूर्ण एफएम ९४.0